DAAWO VIDEO:Muuse Biixi cabdi oo Loo Haysto Guryo Shacab Xoog uu Ku iibsadey
April 13, 2019 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Uncategorized, Wararka Maanta 2
** SPECIAL ROYAL GREETINGS TO HIS VERY ROYAL HIGHNESS SULDAAN DAB LA RIDAY (MAY ALLAH BLESS & PRESERVE HIM) **
Suldaanka karaamada huwanoow waxaan hawada macaan ee geyiga Soomaaliyeed kuu soo marinayaa salaantii Saldanadda ee barakeysnayd ee ah tan Islaamka ee raxmadda xambaarsan. Suldaan, hadda ayaan dhaayaha la haleelay salaantii diiranayd iyo fariintii la socotay ee aad bog hore iigu dhaaftay.
Suldaan, waxaanu shaki ku jirin in si xun laguugu cidloon doono oo lagu tabi doono inta aad safarka ku maqan tahay. Waxaan se Eebbaheena Raxmaanka ah kaaga baryayaa in uu sidii hore ku sii xafido oo uu hawlaha iyo halgankaaga xalaal quudashada salka ku haya guulo kuugu dhammeeyo oo kuu na barakeeyo. Waynu iska war hayn doonnaa Rabbi idankii.
Suldaanoow, khusladaha ahlu iimaanka lagu garto ee aan kuugu jacelahay waxaa ka mid ah sida aad mar kasta aad safri rabto cafiska iyo masaamaxa adigu dadka uga dalabto in kasta oo aad tahay ninka webkan Marqaan aadka loogu caayo lagu na aflagaaddeyn badan yahay. Alle ha kuu ziyaadsho akhlaaqdan dahabiga ah la ma helaanka ah Suldaan.
Marka aan qowl ka idhaahdo dhibaatada ay odayadani ka warramayaan waxaanu shaki ku jirin in marka hore maamul xalaal ahi ee shacabweynaha geyigani uu raalli ka yahay aanu meesha ka jirin. Waa koox qaatiliin ah ee mabda’oodu uu yahay fallaaganimo iyo budhcadnimo. Sida ay fallaagadu ku wada caan baxeen na waa ma naxeyaal aan waxba xeerinin oo maafiyanimo iyo ruufyaannimo ku dhaqma. Xidid iyo xigaal iyo wadaad iyo waayeel toona ma tixgaliyaan. Dhuunta ayaa daloosha oo hambagaad, boob iyo dhac ayuun baa u cad.
Kuwan SNM ka hadhay iyagu waaba ay ka sii xag jiraan oo Dhiigshiil iyo xulufo Carbeed oo Imaaraadka iyo London kaga xeeran ayaa ilo dhaqaale oo xaaraan ah u furay oo hab dhaqanka maafiyada caalamka ku tababaray. Doorasho-ku-sheegta iyo maamulkan ay ka malmalluuqdeen waa ciyaar maskaxeed halis ah ee ay ku dadanayaan boobka iyo dhaca ay ku talo galeen in ay geyigan kaga taajiraan. Kuwii iyaga qabiil ahaan ugu qaraaba kiilayay ee eexda xaq darada ah ku taageerayay (sida odayadan) ayuu hadda xanuunku damqay markii iyana loo soo dhacay. Wax walba waxaa ugu horreeya in la dhaado in aanu maamulkani ahayn mid xalaal ah ee maandheyd leh oo ay ficiladiisu na yihiin sharci daro.
Waxa aad qarsataa waa ay ku qudhunsadaan.